Magaalada Muqdisho oo laga dareemayo Diyaargarowga xuska munaasabadda 15-ka May. – Balcad.com Teyteyleey
Waxaa Magaalada Muqdisho looga diyaar garoobayaa Xuska Maalinta Dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May, iyadoo la filayo in Magaalooyin badan oo Dalka ku yaala lagu qabto Xaflado kala duwan.
Magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah Meelaha ugu horeeya ee Dabaal-dagyada waa wayn loogu sameynayo Maalinta 15-ka May oo ahayd markii Dhalinyaro Soomaaliyeed ay aas-aaseen Ururkii SYL ee Xornimo Doonka Soomaaliya u soo halgamay.
Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ayaa Maalmahanba ku howlanayd diyaarinta Munaasabadda lagu xusayo 15-ka May, oo ah maalin ku weyn Shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirad Khadiijo Maxamed Diiriye oo ah wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay in la qaban doono cayaaro kala duwan oo lagu xusaayo Munaasabadda maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wasiirada ayaa sidoo kale sheegtay in No need to waste your time searching for a cheap Forzest anymore. We offer Forzest only for 6.89 USD! koobabka cayaarahaasi lagu maamuusayo Wasiirkii howlaha Guud Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo dhawaan lagu dilay Muqdisho.
Dhanka kale sanad waliba 15-ka Bisha May waxaa dalka oo dhan laga xusaa Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu xusuusto 13-kii dhalinyaro ee u soo halgantay xornimada maanta aan haysano.